राजधानीमा नेताका भब्य महल जनता अझ पाल मुनी | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार राजधानीमा नेताका भब्य महल जनता अझ पाल मुनी
नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाको काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा आलिशन महल छ । सोही आलिसान महलकै कारण उनले पटकपटक नवसामन्तको आरोप समेत खेप्दै आएका छन् । डडेलधरामा रहँदाको राजनीतिक पृष्ठभूमि बिर्सिएको आरोप उनले आज सम्म खेप्दै आएका छन् ।
प्रधिकरण निर्माणमा किचलो थप्दै आएका देउवाले आलिशन भवन बनाएको विषयमा आरोप खेप्नुप¥यो भने ,
कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं सर्वहारका नेताका रुपमा चिनिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले नयाँ बजारको घरमा त कहिले लाजिम्पाटमा रहेको बंगला खरिद गरि आफ्नै सयल गरि रहेका छन्
। १० वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएका क्रान्तिकारी नेता जसको आडमा आज सत्ताको बागडोर सम्म पुग्न सफल भए उनै जनता आज पानी चुहिने टहरामा रहँदा उनी भने चिल्ला गाडी र आलिसान महलको खोजीमा नै दिन विताउने गरेका छन् । उनको यो घरप्रतिको मोहलाई कसरी वुझनु खै । त्यतिका समय भूमिगत जीवन बिताएका यी नेतालाई किन चाहियो शालिसन भवन ? के उनी जस्तै जनताले त्यस्ता घरमा बसन सक्छन् त ? यस्ता दर्जानौ प्रश्न छन् तै पनि भुकम्प पिडितका पिडामा भन्दा आफनो सोख पुरा गर्नमा नै उनी ब्यस्त रहेको देख्न सकिन्छ ।
१८ माघ ०६८ मा एक भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रचण्डकौ घरका सवालमा ‘नेपालमा लाल सामन्तवाद’ भनेर लेख्यो । सो न्युज पोर्टलको दाबी थियो ‘विश्वको एक गरीब देशका नेता भए पनि प्र्रचण्ड दक्षिण एसियाका धनी नेतामा गनिन्छन् र उनको विलासितापूर्ण जीवनशैलीलाई लाल सामन्तवादको जस्तो छ ।’
यस्तै उखान टुक्काका खानी एवं उखानका महारथ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भक्तपुरको बालकोटमा सुविधा सम्पन्न घर हरेको छ । अध्यक्ष भएपछि पनि उनले आफ्नै कम्पाउन्डमा अर्को घर थपेका छन् । तर भुकम्प पुन निर्माण प्रधिकरण मात्र बनाउन लाई पनि आफ्नो पार्टीको मानिस चाँहिदा जनताको समस्यालाई भने उनले पनि एक वर्ष लगारी दिए ।
यस्तै नेकपा एमालेका विरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको राजधानीको डल्लुमा तीनतले घर छ । उनको पुख्यौली घर इलामको साँखेजुङको घरमा अरु नै बस्छन् ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालको कोटेश्वरमा अढाईतले घर छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रवहादुर चन्दको लोकन्थलीमा त्यस्तै भब्य र सुविधा सम्पन्न घर छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको बोहराटारमा घर त्यस्तै भब्य घर छ ।। पूर्वप्रधानमन्त्री किर्तिनिधी बिष्टको ज्ञानेश्वरमा घर छ ।
मधेशवादी दलहरुका नेतामा हृदयेश त्रिपाठीको विशालनगर र भैसेपाटीमा गरी दुईवटा घर छन् । राजधानीमै घर हुने मधेशवादी दलका नेताहरुमा राजेन्द्र महतो सिनामङगलमा, सरिता गिरीको विशालनगरमा, अनिल झा लाजिम्पाटमा, फोरम शरतसिंह भण्डारी भैसेपाटीमा घर छ, महन्त ठाकुरको सानो थिमीमा घर छ । त्यस्तै अन्य नेताहरको पनि घर छ । विषेश गरेर दोस्रो दर्जाका नैताको पनि राजधानीमा घर छन् ।
साना दलका नेतामा नेकपा माले महासचिव सिपी मैनालीको पनि मैनालीको चाबहिलमा घर छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको भक्तपुरमा पुख्यौली सम्पतीको घर छ ।
सवै नेताका आलिसान महल भएपनि भुकम्प प्रभावित जिल्लाका जनताका भने न घर छ न बास नै ।
जनता च्यातेको पालमा, नेता महलमा